Ahoana ny fomba hahatongavana ho mpamorona sary Lousy: Ny torolàlana farany ho an'ny simba tanteraka | Famoronana an-tserasera
Nandritra ny volana maromaro dia nahazo hafatra manokana izahay tao Facebook y Twitter mametraka izany fanontaniana izany amintsika. Betsaka ny mitomaniacs ao amin'ny tranonkala izay tena maniry ny ho tonga mpamorona sary kilasika. Tsy mahagaga izany fa endrika iray very very tato ho ato miaraka amin'ny fisian'ny tambajotra sosialy sy ireo mpampiroborobo ny zon'ny mpiasa.
Inona no nanjary ilay mpamorona klasika nopotehina sy sempotry ny rafitra manimba ny toe-piainany? Aiza ilay hoe "Tsy zakako mihary vola" na ilay hoe "Mandoa ianao, mpamorona endrika aho"? Androany dia te-hanampy eto izahay ho an'ireo rehetra te-hamerina ny mombamomba ilay tena mpamorona ary te hihazona ilay fahazarana taloha izay simba tanteraka.
1 Raha ny endrika no asanao, miala eto!
1.1 Famantarana? Tsy mila izany ianao raha tsy te ho mpamorona endrika manintona
1.2 Tapitra ny fotoam-pianaranao, tsy mila mahafantatra zavatra hafa ianao
1.3 Aza manadihady na mijery ny vidiny mihetsika eo amin'ny tsena
1.4 Ny marketing sy ny (averinay) dia tsy natao ho anao ny marika
1.5 Tena zava-dehibe: Mandany mihoatra ny karamao, raha tsy izany dia mety hitarika tombony
1.6 Aza milamina, mainka ny fametahana fandaharam-potoana amin'ny asa
1.7 Raha misy olona manakarama anao dia aza mihaino azy ary mazava ho azy aza omena serivisy tsara na mahafeno ny fe-potoana
1.8 Atolory ny asanao MAIMAIMPOANA amin'ny havanao sy ny mpiara-monina aminao
Raha ny endrika no asanao, miala eto!
Alohan'ny hanombohana ity torolàlana kely ity dia hampitandrina anao aho fa ny famolavolana sary dia asa mazava tsara. Midika izany fa raha ny toro-hevitra rehetra ao amin'ity torolàlana ity dia tsy maintsy tanterahina aloha ny fepetra takiana: Atokana ho an'ity asa ity amin'ny alàlan'ny default na, raha tsy izany, noho ireto antony manaraka ireto:
Ianao dia mitady asa ahafahanao mitazona ambaratonga toekarena mampiahiahy amin'ny mora, haingana ary tsy misy fahasarotana be.
Io no lamaody ary hamela anao hiasa an-trano na tsara kokoa koa, avy am-pandriana.
Tsy manana safidy hafa hafa ianao ary hainao ny maka sary tsara.
Tsy te hifoha maraina ianao ary na dia kely aza dia te handany fotoana be amin'ny asanao.
Ny antony hafa izay tsy misy ifandraisany amin'ny foto-kevitra toy ny finiavana, ny filana na ny antony manosika.
Raha asa ianao dia tsy afaka manao n'inona n'inona ho anao aho, tsy ity no lahatsoratrao. Amin'izay voalaza fa andao hanomboka. Manome toky aho fa raha mampihatra ireo torohevitra rehetra ireo ianao ao anatin'ny iray volana dia ho lasa mpamorona sary tsy misy vozon'akanjo fotsy. Manoro hevitra anao ny hanoratanao azy ireo amin'ny takelaka iray ary hitadidy izany ao an-tsainao, tsy ho fantatrao mihitsy hoe rahoviana no hiseho ny mpanjifa hanana fikasana hanakarama anao, voalohany indrindra dia mila mitandrina ianao. Ho tonga aho, raha ny marina amin'ity lahatsoratra ity dia tsy hanonona ireo mpanjifa intsony aho, sanatria izany.
Famantarana? Tsy mila izany ianao raha tsy te ho mpamorona endrika manintona
Ny iray amin'ireo hadisoana ataontsika rehefa manandrana ny ho mpamorona efa simba mahazatra isika dia latsaka ao amin'ny fakam-panahy hamorona ny marika manokana na antsoin'izy ireo hoe Personal Branding. Na dia mahafinaritra aza ny toa mamorona ny sarinao manokana, ny sary famantarana anao manokana na ny bilaoginao manokana aza, ny marina dia mety hitarika anao handrotsaka ny matihanina sy izay mety ho ratsy kokoa izany ... mahazoa ny fitokisan'ireo izay aza miteny.
Tapitra ny fotoam-pianaranao, tsy mila mahafantatra zavatra hafa ianao
Misy teboka iray amin'ny fiainan'ny mpamorona tsirairay rehefa fantatry ny olona ny momba an'io asa io. Indray andro ianao dia mifoha ary mieritreritra "dia izay, fantatro ny zava-drehetra" ary izany dia andro tsara satria tamin'izany fotoana izany dia tsapanao fa vonona ny bankirompitra ianao. Tsapanao fa ny fianarana zava-baovao sy ny fandinihana ny sanganasan'ny olon-kafa dia mety hahatonga anao hamorona zava-baovao. Zava-dehibe tokoa ny fahafantaranao fa ny famoronana sy ny aingam-panahy dia tsy mifanaraka amin'ny fanimbana. Aza adino, efa fantatrao ny zavatra rehetra.
Aza manadihady na mijery ny vidiny mihetsika eo amin'ny tsena
Fomba tsara fampitahorana ireo izay tsy miresaka momba antsika ny fametrahana vidiny lafo ho an'ny serivisy tsy dia lehibe na ratsy. Amin'izany fomba izany no ahazoantsika antoka fa raha misy mandoa ireto vola ireto rehefa mahazo ny serivisinay dia miala amin'ny tahotra izy ireo ary tsy miseho intsony. Na dia manao izany aza isika dia mety hahazo laza ratsy satria azo antoka fa hanome fanamarihana ratsy momba ny asantsika izany ary hanome sosokevitra ny tsirairay aza aho mba tsy hanakarama ny serivisinay. Raha manao izany tsara ianao dia azonao atao ny mahazo ny hafa hiasa ho anao ary amin'izay dia ho tonga eo amin'ny fandringanana ianao.
Ny marketing sy ny (averinay) dia tsy natao ho anao ny marika
Inona no olana? Te hahafantatra anao ve ianao na hahazo asa tsy tapaka? Tsy mety izany? Fantatrao fa manandrama tsy hamidy any ivelany any. Aza manao fampiroboroboana, aza mamorona portfolio (ary raha manao izany ianao dia tokony hampisehoana ireo sanganasa tsy dia matihanina ireo, angamba ireo nanombohanao namolavola tamin'ny fahatanoranao sy mahamenatra ny hafa). Mampihomehy ahy izany satria misy olona maro izay manoratra amiko mangataka torohevitra mba ho mpamorona endrika rava mahazatra kanefa na izany aza dia mijery ny mombamomba azy aho ary mahita pejy iray, profil iray ao amin'ny Deviantart, ao amin'ny Dribbble na i Behance, portfolio matihanina iray. ary tsy izany ihany.… pejy iray izay anoloran'izy ireo serivisy ary koa mamorona tolotra manokana sy serivisy mifameno! Azonao inoana ve izany? Io dia hoe tsy misy lalana. Tsy vitan'ny hoe mila mamaky an'ireto toro-hevitra ireto ianao, fa mila mampihatra azy ireo ... Ny fandravana dia tsy tonga irery fa mila ezaka kely.
Tena zava-dehibe: Mandany mihoatra ny karamao, raha tsy izany dia mety hitarika tombony
Tsy hivarotra moto aminao aho. Indraindray tsy mila miasa mafy isika, tsy eo anilantsika ny vintana ary hiseho ny olona manapa-kevitra ny hanakarama anay. Misy tsipika tsara, izay ihany, tsy misy na inona na inona, tsy mila manao tantara an-tsehatra koa ianao. Saingy alohan'ity dia manana vaovao tsara aho. Azonao atao ny manohy ny maha-mpamorona sary simba anao na ohatrinona ny vola azonao ... Misy lesoka be dia be ary izany dia ny fironan'ny olona mitahiry na mampiasa vola amin'ny fitaovam-piasana mihitsy aza ... Tena mahatezitra iza, marina? Mandany izany rehetra izany, amin'ireo zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny asanao.
Aza milamina, mainka ny fametahana fandaharam-potoana amin'ny asa
Efa betsaka loatra ireo mpamorona mifoha ara-pinoana isan'andro ary tena aloha be koa. Nifoha maraina izy ireo ary hatramin'ny fiandohan'ny andro dia niasa izy ireo hitady ireo izay tsy notononintsika anarana, dia namolavola ny paikadim-barotra izy ireo ary araka ny eritreritrinao fa tsy manome valiny tena tsara ho azy ireo izany.
Raha misy olona manakarama anao dia aza mihaino azy ary mazava ho azy aza omena serivisy tsara na mahafeno ny fe-potoana
Mety hiteraka zavatra iray ny mifanohitra amin'izany: ny tsy fivadihana. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia noforonin'ireo izay te hanana fifandraisana matanjaka amin'ireo izay tsy noresahintsika ary ratsy kokoa, te hiaina am-pahamendrehana amin'ny asany. Hafahafa
Atolory ny asanao MAIMAIMPOANA amin'ny havanao sy ny mpiara-monina aminao
Saika hadinoko. Azo antoka fa ny namanao mandritra ny androm-piainany dia mahalala izay ataonao ary zon'izy ireo ny mitaky ny asanao ho takalon'ny labiera vitsivitsy na indraindray aza tsy misy. Andramo sonia tsara ireo karazan'olona ireo ary manatona azy ireo ho olona tsy maniry an'io. Mila mpandinika tsara fotsiny ianao, afaka mahita ny volony avy hatrany ry zalahy ireto. Matetika izy ireo dia mampanantena anao zavatra toy ny fampiroboroboana ho takalon'ny asa adiny valo, indraindray lava kokoa aza. Aza alaim-panahy, tsy misy fampiroboroboana, izay mety hanakorontana anao fotsiny. Raha manome kafe na tapas anao izy ireo dia azonao ekena izany fa aza manararaotra azy ireo, fantatrao fa ny tena tanjonao dia ny manimba tena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahoana ny fomba hanaovana endrika sary maharikoriko: ny torolàlana farany hitrangan'ny bankirompitra mahatsiravina
Ricardo Martinez dia hoy izy:
Tsara tokoa izany! he he
Nahaliana ahy ny zava-drehetra!
Valiny tamin'i Ricardo Martinez